उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा अग्रवाल चुनिए, यस्तो छ नयाँ कार्यसमिति « Janata Times
उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा अग्रवाल चुनिए, यस्तो छ नयाँ कार्यसमिति
काठमाडौं, साउन ७ । नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा विष्णुकुमार अग्रवाल चयन हुनुभएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाअनुसार परिसंघको १८औं वार्षिक साधारणभामार्फत अग्रवाल अध्यक्ष चयन हुनुभएको हो । अग्रवालले परिसंघमा परिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा इन्टरप्रेनर फोरमको नेतृत्व गरेका थिए । अग्रवाल एमएडब्लू इन्टरप्राइजेज, एमएडब्लू अर्थमुभर, एमएडब्लू इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र एमएडब्लू रेडिमिक्स कंक्रिट लगायतका कम्पनीका सञ्चालक हुनुहुन्छ ।
परिसंघको साधारणभाले ३७ जना राष्ट्रिय परिषद सदस्य चयन गरेको छ । राष्टिय परिषदमा संस्थापक समूहबाट अमित मोर, रतनलाल केडिया, राहुल कुमार अग्रवाल, सन्दिपकुमार शारडा, वरुण कुमार तोडी, शुलभ अग्रवाल, अमित बेगानी, विकास दुगड, राजेश कुमार अग्रवाल, चन्द्र टण्डन, अनुज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, सुरजभक्त पौडेल, निर्वाणकुमार चौधरी, विक्रम सिंघानिया, दीलिप अग्रवाल, शरद कुमार टिबडेवाला, रोहित गुप्ता र आदित्य संघाई चयन हुनुभएको छ ।
यस्तै प्रतिष्ठान तर्फबाट हेमराज ढकाल, निकोलस पाण्डे, वीरेन्द्र राज पाण्डे, वर्षा श्रेष्ठ, लक्ष्मी प्रसाद सुवेदी, गुरु प्रसाद न्यौपाने, राजीवकुमार गुप्ता, राजबहादुर शाह, पम्फा धमला, आशीष गर्ग, द्विराज शर्मा (सिवाकोटी), अशोक शेरचन, तारा प्रसाद पौड्याल र हितेश गोल्छा चयन हुनुभएको छ । संस्थागत सदस्य समूहतर्फबाट गोकुल भण्डारी, कृष्णप्रसाद अधिकारी र बसन्तबहादुर चन्द राष्ट्रिय परिषद सदस्यमा चयन हुनुभएको छ ।
उपाध्यक्ष ढकालसँग जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं, साउन १८ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग जोडेर प्रकाशित तथा
काठमाडौं, साउन १८ । कुमारी इक्विटी फण्डको लाभांश घोषणा भएको छ । योजना ब्यबस्थापक कुमारी
मैलुङ खोलाको आईपिओ भर्ने अन्तिम दिन, अहिलेसम्म कतिले भरे आवेदन ?
काठमाडौं, साउन १८ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले निष्काशन गरेको आईपिओमा आवेदन दिने आज अन्तिम
यसकारण बढ्यो ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको नाफा
काठमाडौं, साउन १८ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको खुद नाफा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८३.०८
अर्थमन्त्री-स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको मित्रता : झम्सिखेलको ‘पोस एरिया’ मा आलिसान बंगला उपहार
काठमाडौं, साउन १८ । ललितपुर झम्सीखेलस्थित डिएभी स्कुल आडको सानो गल्लीभित्र अग्लो पर्खालले घेरिएको एउटा
मैलुङ खोलाको आईपिओमा ३५ गुणा बढीको आवेदन, कतिले भरे शेयर ?
काठमाडौं, साउन १७ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले निष्काशन गरेको आईपिओमा हालसम्म ३५ गुणा बढीको